Imihlahlandlela Yezobuciko - Print Peppermint
I-RGB vs CMYK vs PMS Pantone imibala yamabala...Uyini umehluko?
Buka le vidiyo emfushane futhi ufunde ukuthi iyiphi imodi yombala ekulungele.
Landa Inkomba Yamahhala Yenqubo ye-CMYK Yenkomba noma ...
usithumelele i-imeyili ikheli lakho ku (ulwazi ku printpeppermint.com) futhi sizokuthumelela a I-OFFSET YAMAHHALA PRINTED incwajana.
Kuyini "ukuphuma kwegazi"? - Ukuphuma kwegazi yingxenye yobuciko obuzonqunywa lapho umkhiqizo wokugcina ophrintiwe usikiwa usayizi wokugcina. Inhloso yalokho ukuqhubeka nombala ongemuva, isithombe noma ukwakheka kuze kube semaphethelweni ekhadi. Kumathempulethi ethu, imigqa ebomvu ikhombisa isigaba esopha. Sicela uqinisekise ukuthi yonke imvelaphi inwetshiwe kuze kufike kulayini. Ukopha okuphuma ngokwejwayelekile kungu-1/8 we-intshi (noma u-0.125) ngaphandle kosayizi wokugcina wokugcina.
Imininingwane Ephelele Yefayela
Landa Ama-Art Guides - i-PDF
Ukopha: wonke amafayela kufanele abe nokopha okungu-1/8″ ohlangothini ngalunye
Indawo ephephile: gcina wonke umbhalo obalulekile nomsebenzi wobuciko ngaphakathi kokunquma
Imibala: nika amafayela akho ngemodi yombala ye-CMYK uma uphrinta inqubo yemibala emi-4
Imibala: hlinzeka amafayela akho ngokulungile Pantone (U noma C) imibala ekhethiwe kufayela.
Ukulungiswa: 300 dpi
Amafonti: amafonti kufanele aguqulwe abe amajika/uhlaka
Ukubonisa ngale: caba konke obala
Izinhlobo Zefayela: Okuncanyelwayo: PDF, EPS | Futhi kwamukelwe: TIFF noma i-JPEG
Iphrofayela ye-ICC: I-Japan Coated 2001
Ungawalungiselela Kanjani Amafayela Wokuqeda
Uma iphrojekthi yakho ifaka phakathi ucwecwe wokushaya, indawo UV, embossing, noma die ukusika uzodinga ukuhlinzeka ngefayela lemaski (ngokuqeda ngakunye) eceleni kwamafayela wakho wokuklama.
Dala ifayela le-pdf elimnyama nelomhlophe lapho zonke izindawo ezimnyama zinenani lemibala le-
Izindawo ezimnyama zimelela lapho ufuna ukuthi ukuphela kube khona futhi okumhlophe kusho ukuthi akukho kokuqeda kuzosetshenziswa.
Uma iphrojekthi yakho iqukethe ukuphela okungaphezu kokukodwa, kufanele unikeze ngamafayili e-mask ahlukile ekugcineni ngakunye.
Imibuzo Evame Ukubuzwa - Umsebenzi Wobuciko
Ukuthekelisa Ifayela le-Pdf ephrintiwe kusuka ku-Illustrator noma i-Indesign.
Ngesikhathi sokuthunyelwa kwamafayela wakho aphrintiwe, kufanele uqinisekise ukuthi amafayela akho akulungele ukuphrinta. Dlulisa amehlo kokuqukethwe ukuze wazi ukuthi zingaphakathi… Funda kabanzi
Yini ifayela lemaski?
Ungawasetha Kanjani Amafayela WeMask Uma iphrojekthi yakho ifaka ukugxivizwa kwe-foil, i-UV spot, i-embossing, noma ukusika kokufa kuzodingeka unikeze ngefayela lesifihla (ngakunye… Funda kabanzi
Kuyini i-UV uv? Kungani ngiyifuna? Kwenziwa kanjani?
Njengoba kungenzeka uke wezwa, ukumbozwa kwe-UV kubhekisa ekusebenziseni ijazi elicacile loketshezi ngaphezulu kwemiklamo ephrintiwe. Lokhu kulashwa ngaphansi kokukhanya kwe-ultraviolet, kuyomiswa… Funda kabanzi
Ngiwubeka kanjani umsebenzi wami wobuciko bokunyathela kanye nokwenziwa kokugqunywa kwamatshe?
Udinga ukudala amafayela womaskhi amabili wamaphrojekthi wokuklama adinga ukugxivizwa kwe-foil nokufakwa embossing. Umuntu kufanele abe yifayela lokuzifihla le-foil… Funda kabanzi
Ngiwubeka kanjani umsebenzi wami wobuciko bokuzala?
Ukusetha amaphrojekthi akho wokuklama wokugqamisa, kufanele udale ifayela lemaski usebenzisa izinhlelo ezifana nalezi Adobe I-InDesign kanye ne-Illustrator. Nakhu onakho... Funda kabanzi
Okushiwo yi-cut cut die cut futhi kusethwa kanjani?
Ukuzisika kwe-die kusho ubuciko bokusika inkambiso noma ubujamo obuchazwe ngaphambilini bephuma ekhadini noma ephepheni leflaya. Ukwehlukaniswa kokufa okungaphezulu kuphindaphinda le nqubo kusetshenziswa… Funda kabanzi
Ngiwubeka kanjani umsebenzi wobuciko womkhiqizo osikiwe wokufa?
Thola uhlelo oluhle lokuklama i-vector njenge Adobe I-InDesign noma i-Illustrator ukuze udale ifayela lemaski lamaphrojekthi akho okusika ukufa. Nansi indlela… Funda kabanzi
Yini ama-DOs & Don'ts lapho kuklanywa imikhiqizo ene-foil enesitembu?
Labo abahlela ukudala ubuciko babo bokuthwebula kudingeka bakhumbule eminye imithetho ukuqinisekisa impumelelo yephrojekthi yabo. Uma udizayina… Funda kabanzi
Ngabe kunendaba ukuthi ifayela lami lingama-bits ayi-8 ngesiteshi noma amabhithi ali-16 ngesiteshi?
Yebo, ukujula kombala owuthandayo kuwo wonke amafayela ngama-bits ayi-8 ngesiteshi.
1. Imodi Yombala
Inqubo yokuphrinta ngombala ogcwele idinga ukuthi ubuciko bugcinwe ngemodi enemibala emine ye-CMYK (imodi ye-cyan, magenta, ephuzi nomnyama). Lokho kungenxa yokuthi imishini yokuphrinta isebenzisa amapuleti ama-4 (ipuleti elilodwa lombala ngamunye) ukufeza inhlanganisela yokugcina yalokho kuqamba isithombe sobuciko.
Kodwa-ke, ingqikithi yobuciko obumnyama nokumhlophe noma izithombe kufanele zibe kumodi yombala ye-GRAYSCALE ukuze uthole lokho okugcwele, okumnyama okucebile ekuphumeni kokugcina. Amafayela aku-RGB (Red, Green, Blue), kanye Pantone imibala, izoguqulwa ngokuzenzekelayo ibe yi-CMYK.
Kangangokunokwenzeka, sicela uchaze amafonti akho (ku-illustrator naku-inDesign). Lokhu ukuvikela noma yiziphi izingqinamba zefonti lapho umsebenzi wakho uphrintiwe. Uma uhambisa amafayela weQuark Xpress noma we-InDesign, sicela ufake ifolda yefonti equkethe zonke izinhlobo zobuso ezisetshenziswe kusakhiwo sakho. Sicela ungasebenzisi usayizi wefonti omncane kunamaphuzu ayi-8. Imvamisa, amafonti amancane kakhulu noma amancane kakhulu angahle angafundeki ikakhulukazi uma ephrintiwe kuzizinda ezimnyama noma ezimatasa.
3. Ubufakazi Bokufunda
Ngaphambi kokuhambisa umsebenzi wakho wobuciko, sicela uhlole futhi ubuyekeze wonke amakhophi / umbhalo wama-typos noma amagama angapelwanga kahle. I-PDF izotholakalela ukubukwa ngemuva kokuthunyelwa kobuciko ukuhlinzeka ithuba lokuhlola yonke into ngaphambi kokuthi imisebenzi yakho inyatheliswe. Lapho umsebenzi uvunyiwe, asikwazi ukubhekana nanoma ikuphi ukushicilelwa okungalungile noma amaphutha kokuphrintiwe okuphelile.
Ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu yokuphuma, ukulungiswa okuncane kokwenza ubuciko yi-300 dpi (amachashazi nge-inch). Qiniseka ukuthi amafayela wakho wesixhumanisi noma izithombe (ikakhulukazi ku-illustrator, QuarkXpress, ne-InDesign) zikulesi sinqumo noma ngaphezulu. Izithombe zidinga ukwakhiwa ku-300dpi noma ngaphezulu ukuze kuqinisekiswe ukuthi ngeke kube nokuncipha okukhulu kwekhwalithi-evamile okuzoholela ezithombeni ezifiphele ezinemiphetho emile. Uma uskena izithombe, sicela uqinisekise ukuthi izilungiselelo zingezithombe nokuthi isisombululo futhi si-300 dpi noma ngaphezulu.
5. usayizi wefayela
Kumafayela amakhulu kuno-10MB, sincome ukuthi ucindezele ifayela lakho usebenzisa ama-software afana ne-WinZip (ye-Windows) noma i-Stufflt (ye-Mac). Ungathumela nemisebenzi yakho yobuciko ngokubhalisela i-akhawunti yamahhala ku- Sidlulisa.
6. Isikhathi Sokulayisha
Ukulayisha ifayili kungathatha isikhashana kuya ngejubane lokuxhumeka kwakho nosayizi wobuciko bakho. Ukulayisha ifayili elingu-4MB kungathatha cishe imizuzu emihlanu kuxhumano lwe-DSL. Uma unenkinga nomlayishi wethu, ungahlala uthumela ama-imeyili amafayela akho ukusekela i- @printpeppermint.com noma usebenzise insizakalo yokuthumela ifayela efana ne- Sidlulisa.